Gịnị Bụ Agha Amagedọn? | Ajụjụ Ndị Baịbụl Zara
GỤỌ NKE Afrikaans Albanian Alur American Sign Language Amharic Arabic Arabic (Lebanon) Armenian Armenian (West) Azerbaijani Azerbaijani (Cyrillic) Batak (Toba) Bicol Bislama Bulgarian Cebuano Chavacano Chichewa Chilean Sign Language Chin (Hakha) Chinese (Shanghainese) Chinese (Sichuanese) Chinese Cantonese (Simplified) Chinese Cantonese (Traditional) Chinese Mandarin (Simplified) Chinese Mandarin (Traditional) Chitonga Chitonga (Malawi) Chitumbuka Cibemba Croatian Czech Danish Dutch Efik English Estonian Ewe Faroese Fijian Finnish Fon French Ga Georgian German German Sign Language Greek Greenlandic Haitian Creole Hausa Hebrew Hiligaynon Hungarian Igbo Iloko Indonesian Isoko Italian Italian Sign Language Japanese Japanese Sign Language Javanese Kabuverdianu Kachin Kannada Kikamba Kikaonde Kikuyu Kiluba Kinyarwanda Kirghiz Kirundi Kongo Korean Kwanyama Latvian Lingala Lithuanian Luo Macedonian Malagasy Malay Malayalam Maltese Mam Maya Myanmar Nepali Norwegian Nzema Okpe Oromo Ossetian Pangasinan Papiamento (Aruba) Papiamento (Curaçao) Persian Peruvian Sign Language Polish Polish Sign Language Portuguese Portuguese (European) Punjabi (Shahmukhi) Quichua (Imbabura) Rarotongan Romanian Russian Russian Sign Language Samoan Sepedi Serbian Serbian (Roman) Sesotho (Lesotho) Setswana Shona Sidama Sinhala Slovak Slovenian Spanish Spanish Sign Language Sranantongo Swahili Swedish Tagalog Tahitian Tatar Telugu Tetun Dili Thai Tigrinya Tongan Tsonga Turkish Turkmen Twi Tzotzil Ukrainian Umbundu Urdu Valencian Venda Venezuelan Sign Language Vietnamese Xhosa Yoruba Zulu
Agha Amagedọn bụ agha ikpeazụ a ga-alụ n’ụwa a. Ọ bụ Chineke na ndị ọchịchị ga-alụ ya. Ndị ọchịchị a na ndị na-akwado ha ebidolarị imegide Chineke ugbu a ebe ọ bụ na ha ekweghị anabata ọchịchị ya. (Abụ Ọma 2:2) Ọ bụ agha Amagedọn ka Chineke ga-eji bibie ọchịchị ụmụ mmadụ.​—Daniel 2:​44.
Ọ bụ naanị otu ugbo ka “Amagedọn” gbara na Baịbụl. Ọ gbara ná Mkpughe 16:16. N’akwụkwọ Mkpughe, e buru amụma na a ga-akpọkọta “ndị eze nke elu ụwa dum mmadụ bi” “n’ebe a na-akpọ Ha-Magedọn n’asụsụ Hibru” “maka ibu agha nke oké ụbọchị nke Chineke, Onye Pụrụ Ime Ihe Niile.”​—Mkpughe 16:14.
Ole ndị ga-alụ agha Amagedọn? Jizọs Kraịst ga-edu ndị agha nọ n’eluigwe bịa bibie ndị iro Chineke. (Mkpughe 19:11-​16, 19-​21) Ndị na-emegide ọchịchị Chineke na ndị kpọrọ Chineke asị so ná ndị a a ga-ebibi.​—Ezikiel 39:7.
À ga-alụ agha Amagedọn naanị ná mba Izrel ma ọ bụ n’ebe dị ya nso? Mba. Ọ bụghị naanị n’otu ebe ka a ga-alụ agha Amagedọn. Ọ bụ agha ga-ezu ụwa niile ọnụ.​—Jeremaya 25:32-​34; Ezikiel 39:17-​20.
Okwu ahụ bụ́ Amagedọn pụtara “Ugwu Megido.” Otú ọzọ e sikwa ede ya bụ “Ha-Magedọn” (otú e si ede ya n’asụsụ Hibru bụ Har Meghiddohnʹ). Megido bụ obodo dịbu n’ala Izrel. A nọkwa n’ebe ndị dị nso na Megido lụọ ọtụtụ agha ndị e ji mara ndị bụ́ ọkaibe. E dere banyere ụfọdụ agha ndị ahụ na Baịbụl. (Ndị Ikpe 5:​19, 20; 2 Ndị Eze 9:​27; 23:29) Ma, Amagedọn abụghị ugwu nkịtị dị́ nso na Megido oge ochie. O nweghị nnukwu ugwu dị na Megido, Ndagwurugwu Jezril dị́ nso ebe ahụ agaghịkwa aba ndị niile ga-alụso Chineke agha. N’Amagedọn, mba dị iche iche ga-ezukọta nke ikpeazụ ya imegide ọchịchị Chineke.
Gịnị ka Chineke ga-eji alụ agha Amagedọn? Anyị amachaghị ihe Chineke ga-eji alụ ya. Ma, anyị ma na o nwere ọtụtụ ihe o ji lụọ agha n’oge ochie o nwekwara ike iji lụọ agha a, dị ka, akụ́ mmiri igwe, ala ọma jijiji, oké mmiri ozuzo, ọkụ na sọlfọ, àmụ̀mà, na ọrịa na-efe efe. (Job 38:22, 23; Ezikiel 38:19, 22; Habakọk 3:​10, 11; Zekaraya 14:12) Jehova nwekwara ike itinye ụfọdụ ndị iro ya n’ọgba aghara, ha egburịtawa ibe ha. Ma, ha ga-emecha mata na ọ bụ Chineke na-ebuso ha agha.​—Ezikiel 38:21, 23; Zekaraya 14:13.
Agha Amagedọn ọ̀ ga-eweta ọgwụgwụ ụwa? Ọ gaghị eme ka ụwa anyị a gharazie ịdị n’ihi na Chineke kere ụwa a ka ụmụ mmadụ biri na ya ruo mgbe ebighị ebi. (Abụ Ọma 37:29; 96:10; Ekliziastis 1:4) A gaghịkwa ebibi mmadụ niile n’agha Amagedọn. Kama, a ga-eji ya zọpụta ụmụ mmadụ n’ihi na Baịbụl kwuru na a ga-azọpụta “oké ìgwè mmadụ” bụ́ ndị ohu Chineke.​—Mkpughe 7:​9, 14; Abụ Ọma 37:34.
N’ebe ụfọdụ e kwuru gbasara “ụwa” na Baịbụl, ihe a na-ekwu bụ ụwa nkịtị. Ma, e nwere ebe ụfọdụ “ụwa” a na-ekwu okwu ya bụ ndị na-adịghị asọpụrụ Chineke. (1 Jọn 2:​15-​17) Ihe ọ pụtara bụ na ọ bụrụ na “ụwa” a na-ekwu okwu ya bụ ndị na-adịghị asọpụrụ Chineke, ọ dabara adaba ikwu na Amagedọn ga-eweta “ọgwụgwụ ụwa.”​—Matiu 24:3, Baịbụlụ Nsọ nke International Bible Society.
Olee mgbe a ga-alụ agha Amagedọn? Mgbe Jizọs na-ekwu banyere “oké mkpagbu” nke ga-ebi n’agha Amagedọn, o kwuru, sị: “Ọ dịghị onye maara ụbọchị ahụ na oge awa ahụ, ndị mmụọ ozi nke eluigwe amaghị, Ọkpara ahụ amaghịkwa, kama ọ bụ naanị Nna m maara.” (Matiu 24:21, 36) Ma, Baịbụl kwuru ihe gosiri na a ga-alụ agha Amagedọn n’oge ọnụnọ Jizọs. Ọnụnọ Jizọs ebidola kemgbe afọ 1914.​—Matiu 24:37-​39.
Zigara Ya Onye Ọzọ Zigara Ya Onye Ọzọ Gịnị Bụ Agha Amagedọn?
ijwbq isiokwu 85
Gịnị Bụ Oké Mkpagbu Ahụ?